बालबालिकालाई कोरोनाबाट कसरी बचाउने, संक्रमण भइहालेमा के गर्ने ? यसाे भन्छन डा भट्टराई — Sanchar Kendra
काठमाडाैं । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा बालबालिका पनि पीडित छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बालबालिकामा संक्रमणदर तिब्र छ। नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहरमा १० वर्षभन्दा मुनिका २.३ प्रतिशत बच्चालाई कोरोना संक्रमण भएको थियो भने १० देखि २० वर्षका बालबालिमा करीब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा संक्रमण भएको थियो। तर अहिले अप्रिलसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका कोरोना संक्रमित भइसकेका छन्।
छिमेकी मुलुकमा भारतमा पनि पहिले १० प्रतिशतभन्दा कम बालबालिकामा कोरोना संक्रमण रहे पनि अहिले १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बालबालिमा संक्रमण छ। संक्रमणदर बढेसँगै यसको सघनदर, अस्पताल भर्ना हुने दर र मृत्युदरसमेत स्वतः वृद्धि हुन्छ।
अहिले बच्चालाई पनि कोरोनाबाट बचाउन अभिभावकलाई जस्तो सावधानी अपनाउनुपर्छ। बच्चामा कोरोना संक्रमणदर बढ्नुका पछाडि भाइरसले रूप परिवर्तन गर्नु नै हो। यो बदलिएको भारइस शरीरमा छिर्ने र शरीरले देखाउने प्रतिक्रिया फरक भएकाले यसको आक्रमण, संक्रमण, अस्पताल भर्ना र मृत्युदर बढेको हो। त्यसैले बच्चामा यसको जोखिम बढी हुन्छ।
अभिभावकले पनि बच्चामा कोभिडले खासै असर गर्दैन। बच्चाहरूलाई त चाँडै निको भइहाल्छ नि भन्ने सोचाइले पनि गम्भीर स्थिति आउनसक्छ। अर्कोतर्फ संसारमा कतै पनि बच्चाहरूमा खोप लगाइएको छैन। त्यसले पनि बच्चामा संक्रमणदर बढी हुन्छ।
अभिभावकले भ्याक्सिन लगाएको भए पनि अब कोरोना लाग्दैन भन्ने भ्रम पाल्नु हुन्न। किनकि, भ्याक्सिन लगाउँदैमा कोरोना नलाग्ने भन्ने हुन्न। यसले कुनै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने संक्रमणदर हटाउने होइन। गम्भीर स्थिति पुग्नबाट बचाउने मात्र हो। त्यसैले अभिभावक आफूले खोप लगाए पनि बच्चालाई बचाउन विभिन्न सावधानी अपनाउनु जरूरी छ।
(डा. धर्मागत भट्टराई (एम.डी.,डी.एम.) पेडियाट्रीक इम्युनोलोजिस्ट एवं र्‍यूमाटोलोजिस्ट हुन्।)
देशभर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या उकालो लागिरहँदा स्थानीय तहले सामान्य काम गरिदिँदा महामारीको स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञ चिकित्सकहरूले बताएका छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका सङ्क्रमितभन्दा घरमै बसेका सङ्क्रमितको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा नियमित जानकारी राखेर स्थानीय तहले सामान्य काम गरिदिँदा स्थिति सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ।
घरमै बसेका सङ्क्रमितका लागि सामान्य व्यवस्थापनका काम स्थानीय तहले गरिदिए अस्पतालमा सङ्क्रमितको चाप नबढ्ने सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बास्तोला बताउँछन्। डा. बास्तोला भन्छन्, “सबै स्थानीय तहले हामीले जस्तै काम गरिदिनु पर्छ भन्ने होइन। तर सङ्क्रमितको सामान्य व्यवस्थापनका काम गरिदिए हामीलाई अस्पतालमा चाप कम हुने थियो।”
घरमै बसेका सङ्क्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले चार काम गर्नसक्ने डा. बास्तोलाको भनाइ छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखामा कर्मचारी थपेर भए पनि ती काम गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।
के हुन् त ती चार कामहरू?
सङ्क्रमितको सही तथ्याङ्क राख्ने र सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिइरहनु पर्ने डा. बास्तोला बताउँछन्। उनले भने, “अहिले साँच्चै भन्ने हो भने अलिकति अप्ठ्यारो पर्दा हामीलाई फोन आउँछ। कुदेर अस्पताल आउँछन्। यहाँ राम्ररी हेर्दा केही भएको हुँदैन।”
“आफ्ना क्षेत्रमा कति सङ्क्रमित छन् र उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा हेरिदिए हामीले अस्पतालमा चाप भोग्नुपर्ने थिएन।” सङ्क्रमितको अक्सिजन लेबल हेर्ने र लक्षणसहितका सङ्क्रमितको छातीको एक्स-रे गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने विज्ञले बताए।
कोरोना भाइरसका सबै सङ्क्रमितमा सङ्क्रमणका लक्षण नदेखिने तर लक्षण देखिएका धेरैमा छ दिनदेखि १० मा निमोनिया भएका बिरामी भेटिएका जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले बताए।
डा. पाण्डेले भने, “घरमै बसेका लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरूको कम्तीमा एक सातामा छातीको एक्स-रे गरिदिने व्यवस्था मिलाए जटिलता आउनसक्ने बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन सहज हुने थियो।”
सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. बास्तोलाले अक्सिजन लेबल हेरेर लेबल कम भएका, लगातार खोकी लागेका, श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेका र ज्वरो आइरहेका बिरामीको छातीको एक्स-रे गर्ने व्यवस्था अनिवार्य मिलाउनु पर्ने बताउँछन्।
सङ्क्रमण भएर घरमै बसेका कतिपय बिरामीको अस्पताल नगई मृत्यु भएका विवरण आइरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा जटिल किसिमका लक्षण भएका सङ्क्रमितलाई अस्पताल पुर्‍याउनका लागि स्थानीय तहले व्यवस्था मिलाइदिए उपचारमा सहजता आउने चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन्।
जनस्वास्थ्यविद् डा. पाण्डेका अनुसार वडा कार्यालय तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाले यतिको व्यवस्था मिलाउन सहयोग भए सङ्क्रमितले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था घटेर जान्छ।
घरमै बसेका कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरू अनुगमन गर्न स्थानीय तहले ध्यान नदिएको गुनासा आइरहँदा उनीहरूको हिँडडुलको अनुगमन अहिले झन् अपरिहार्य भएको चिकित्सकले बताएका छन्।
डा. बास्तोलाका अनुसार त्यस्ता सङ्क्रमित घर बाहिर निस्किए सङ्क्रमणले झन् गति लिने भएकाले त्यसप्रति स्थानीय सरकार सजग हुनुपर्छ। उनले भने, “अहिले त झन् घरमा एक जनालाई सङ्क्रमण हुँदा परिवारका धेरै सदस्यलाई सङ्क्रमण सरेको पाइरहेका छौँ। झन् उनीहरू घर बाहिर गए के होला?”